Madaxweynayaasha Jubbaland ee Kismaayo kuwada sugan oo mid kamid ah ku dhawaaqay dagaal culus
November 5, 2019 Mahad Jama 0
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in hogaamiye C/naasir Maxamuud Seeraar oo kamid ah madaxweynayaasha is diidan ee ka jira Jubbaland uu haatan qorshaynayo dagaalo culus.
Mr. Seeraar oo taageerayaashiisa Jubbaland ugu doorteen madaxweyne gudaha magaalada Kismaayo 23-kii bishii August ayaa safaro iyo weeraro kala duwan ku kala bixin doona deegaano ka tirsan Jubbaland.
Seeraar oo la aaminsan yahay in uu taakulo ciidan ka helo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xiligani diyaarsaday hub iyo ciidan badan oo uu ku wajahayo Al-shabaab, waxaana uu qaadi doonaa dagaalo ka dhan ah Al-shabaab.
Deegaanada uu lugta ku mari doono ayaa waxaa kamid ah Dhoobleey, Baardheere, Garbahareey, Luuq iyo Doolow, isagoo uga sii gudbi doona degmada Bu’aale oo haatan ay maamulaan Al-shabaab oo uu damacsan yahay in uu ka qabsado.
Sheekh Daahir Axmed C/laahi oo kamid ahaa hogaamiyaashii ugu miisaanka cuslaa kooxdii Raaskambooni ee Axmed Madoobe hogaamiyaha ka ahaa ayaa xiligani kamid ah raga la safan Seeraar, waxaana bartilmaameedkooda lagu sheegay beegsiga magaalada Bu’aale iyo sidii Al-shabaab ay uga saari lahaayeen deegaankaasi.
Qorshayaasha Seeraar iyo Axmed Madoobe ayaa isku mid ah, waxaana hogaamiye kasta dhankiisa kawadaa qorshe dagaal oo uu ku wajahayo Al-shabaab.
Axmed Madoobe oo maalintii shalay ahayd kulan xasaasi ah la qaatay hogaamiyaasha ciidamada xoogga dalka, kuwa Jubbaland iyo saraakiil ka socota ciidamada AMISOM ayaa ciidamada faray in ay qaadaan dagaal ka dhan Al-shabaab, waxaana saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM uu ku adkeeyey in ay isku diyaariyaan taakulaynta iyo garab istaaga ciidamada Jubbaland.
Qabsashada deegaanada ka maqan gacanta Jubbaland ayaa sheegay in ay faa’iido weyn u tahay maamulkiisa, waxaana uu ciidamada amray in ay isku diyaariyaan dagaal ka dhan Al-shabaabka ku sugan Jubbaland deegaanadeeda.
Lama oga waxa ay yeeli doonaan labada hogaamiye iyo in ay iska kaashan doonaan dagaalka Al-shabaab hasa yeeshee waxaa mid walbaaba dhankiisa xiligani kawadaan hawlgal ciidan oo ku aadan Al-shabaab.